बलिवुड – Khabaarpati
February 16, 2021 goodmamLeaveaComment on घरबेटीले कोठाबाट निकालेपछि सडकमा बच्चासहित बसिरहेकी महिलालाइ अभिनेता सुनुले उद्दार गरि घर बनाइदिए
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सोनु सुद लकडाउनको समयमा बाटोमा अलपत्र परेकाहरुलाई आफ्नै खर्चमा उनीहरुको गन्तब्य सम्म लैजान ब्यस्त थिए । उनले त्यसरी हजारौं नागरिकलाई सहयोग गरे । अलपत्रलाई सम्बन्धीत ठाउँमा लैजाने मात्र होइन खान नपाएकाहरुको पेट पनि भरे । उनको यस्तो कामको सबैतिर चर्चा भयो । अहिले उनले सडकमा अलपत्र महिला र बच्चाको उद्दार गरेका […]
February 14, 2021 goodmamLeaveaComment on आमिर खानकी छोरीमाथि शा रीरिक शो’षण भएको खुलाशा
February 9, 2021 Khabar PatiLeaveaComment on पैसाकाे लागि तेस्राे श्रीमती बनेका बलिउडका यी ९ चर्चित अभिनेत्री
बलिउडमा कुनै पनि अभिनेत्रीको विवाह हुनु फिल्मी यात्रामा बिराम लाग्नु हो भन्ने मान्यता छ। त्यसैले बलिउड अभिनेत्रीहरुले ३० कटेपछी बिहे गर्ने गरेको देखिएको छ। यसरी बिबाह गर्नेहरुमा धेरैजसो अभिनेत्रीहरुले दोस्रो पत्नी बन्दै घरजम गरेका छन्। यसरी दोस्रो विवाह गरेर घरजम गर्ने अभिनेत्रीहरुको सूचि यस्तो छ र करिष्मा कपुरः करिनाकी दिदी करिष्मा १९९० कि चर्चित नायीका […]
February 1, 2021 February 1, 2021 goodmamLeaveaComment on आखिर कस्तो दुखमा छिन् आलिया, किन रोइन् लाइभ अन्तरवार्तामा नै डाँको छोडेर ? के रणविरले धोका दिए !
एनेन्सी – बलिउड चर्चित अभिनेत्री हुन् आलिया भट्ट । उनि फिल्म क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक संजालमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । पछिल्लो समय बलिउडमा रणवीर र आलियाबीच विशेष सम्बन्ध रहेको हल्ला चलेको छ । तर त्यो हल्ला नभई उनिहरुको प्रेम रहेको नै रहेको छ । सानै उमेरमा नै आलियाले चर्चा बटुल्न सफल भएकी हुन् […]
प्रियंकाको कान्सको रेड कार्पेटमा जानु ठिक अघि ड्रेसको चेन फुस्किएपछि.. (तस्विर सहित)
January 31, 2021 goodmamLeaveaComment on प्रियंकाको कान्सको रेड कार्पेटमा जानु ठिक अघि ड्रेसको चेन फुस्किएपछि.. (तस्विर सहित)
प्रियंका चोपडाका किताब अनफिनिस्ड रिलिज हुने तयारीमा छ जसमा उनले आफ्नो जीवनमा घटिन विभिनन किस्सा लेखेकी छिन् । आफ्नो किताबको एक किस्सा उनले सोसल मिडियामा सेयर गरेकी छिन् जुन सन् २०१९ मा उनको कान्स फिल्म फेस्टिबलमा डेब्यूसँग जोडिएको छ । प्रियंकाका अनुसार उनले जुन ड्रेस रेड कार्पेट लगाएकी थिइन्, त्यसको चेन अन्तिम अवस्थामा टुटेको थियो […]
January 31, 2021 goodmamLeaveaComment on यसकारण सलमान खान जीवनभर बिहे गर्न चाहन्न , बुवा सलीमले खोले पहिलोपटक यस्तो र’हस्य
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान ५० वर्ष नाघिसकेका छन् । तर पनि उनलाई संधै गरिने एउटा प्रश्न हो । विवाह कहिले गर्ने ? ब्यवसायीक जिवनमा निकै सफल अभिनेता सलमानको ब्यक्तिगत र प्रेम जिवन भने सुखमय भएन । उनको धेरै नायीकाहरुसंग नाम जोडियो तर सबैले उनलाई छोडे । पछिल्लो समय कैट्रीना क्याफसंग नजिक रहेका सलमानसंग उनको सम्बन्ध […]
January 31, 2021 goodmamLeaveaComment on १५ बर्षमै प्रेम गरि केटाहरुसंग हिड्न लागेपछि, करिनालाई आफ्नै आमाले गरेकी रहेछन् घेराबन्दी
दोस्रो पटक गर्भवती भएकी बलिउडकी अभिनेत्री करीना कपूर यतिबेला चर्चामा छिन् । उनी गर्भवती भएको समयमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्छिन् । उनी सम्बन्ध, प्रेम र फिल्मका कारण चर्चामा आउने गर्छिन् । उनी विभिन्न समयमा हुने अन्तरवार्तामा आफ्ना जीवनका रमाइलो पलहरु सेयर गर्ने गर्छिन् । यसैबीच, उनले आफ्नो पहिलो प्रेमसम्बन्धको बारेमा खुलासा गरेकी छिन् । उनले […]
January 30, 2021 goodmamLeaveaComment on २३ वर्षको उमेरमै तीनवटा चलचित्र खेलेर जान्वी कपुरले किनिन् ६२ करोड भन्दा माथिको महँगो घर
काठमाडौं । बलिउडमा पछिल्लो समयकी हट केक नायिका हुन् जान्वी कपुर । चलचित्र ‘धडक’बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी जान्वीलाई अहिले मिडियाले पछ्याइरहेको छ । उनको करिअरसँगै व्यक्तिगत जीवनको विषयमा पनि विभिन्न समचारहरु आइरहेका हुन्छन् । बलिउड अभिनेत्री जान्वी कपुरले तीनवटा फिल्ममा मात्र काम गरेकी छिन । तर उनले मुम्बईस्थित जुहुमा आफ्ना लागि ३९ करोड भारतीय रुपियाँ […]
अनुपम खेरको जिन्दगीमा किरण आएपछि…
January 29, 2021 goodmamLeaveaComment on अनुपम खेरको जिन्दगीमा किरण आएपछि…
बलिउड अभिनेता अनुपम खेरले आज आफ्नो विवाहको ३५ औं विवाह उत्सव मनाइरहेका छन् । यस विशेष दिनमा उनले एक ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट तस्वीर सेयर गरेका छन् । तस्वीरमा अनुपमले किरणको निधारमा मायाले किस गरेको देख्न सकिन्छ । तस्वीर सेयर गर्दै अनुपम खेरले पत्नी किरणलाई विवाहत्सवको बधाई दिदै लामो क्याप्सन लेखेका छन् । क्याप्सनमा किरणको लागि […]
सलमान र शाहरुखको आमा अहिले कहाँ के गर्दैछिन् ?
January 29, 2021 goodmamLeaveaComment on सलमान र शाहरुखको आमा अहिले कहाँ के गर्दैछिन् ?
मुम्बई(एजेन्सी) । अभिनेत्री राखी ७०, ८० र ९० को दशककी फिल्मकी चर्चित अनुहार हुन् । उनले ‘शर्मिली’, ‘दाग’, ‘कभी–कभी’, ‘तपस्या’ जस्ता दशौं सुपरहिट क्लासिक फिल्म दर्शकलाई दिएकी छन् । करियरको शुरुवातमा उनले सन् १९७३ मा प्रख्यात निर्देशक, कवि तथा कथाकार गुलजारसँग विवाह गरेकी थिइन् । यो जोडीबाट छोरी मेघनाको जन्म भएप्छि गुलजारसँग राखीले सम्बन्धविच्छेद गरिन् […]